ယူနိုကျတကျ ဂန်ဓဝငျ ရိုငျယနျဂဈကိုကူညီပေးခဲ့ကွတဲ့ ကစားသမားလေးယောကျက ဘယျသူတှလေဲ?
January 28, 2020 Writer News 0
လကျရှိ ဝေးလျ လကျရှေးစငျ အသငျး ရဲ့ နညျးပွ ဖွဈသူ ရိုငျယနျဂဈဟာ ကစားသမား ဘဝ တဈခုလုံး ကို ယူနိုကျတကျ အသငျးမှာပဲ မွှုပျနှံ ထားခဲ့သူဖွဈပွီး၊ သူဟာ ၉၂ မြိုးဆကျထဲက တဈဦးဖွဈပါတယျ။ ရိုငျယနျဂဈဟာ ယူနိုကျတကျမှာ ဘယျတောငျပံတလြောကျ အကောငျးဆုံးကစားခဲ့ပွီးတိုကျစဈအတှကျ ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါတယျ။ ရိုငျယနျဂဈဟာ အသကျ ၄၀ လောကျအထိ ယူနိုကျတကျရဲ့ စီနီယာအသငျးမှာ ကစားခဲ့တာဖွဈပွီး နောကျဆုံး ကစားတဲ့အခွအေနမှောတော့ ကှငျးလယျတိုကျစဈပိုငျးကို ပွောငျးလဲကစားခဲ့ပါတယျ။
ရိုငျယနျဂဈဟာ ယူနိုကျတကျ အသငျးမှာ ကစားခဲ့တဲ့ အခြိနျ အတှငျးသူ့အနနေဲ့ ရှိုငျကိနျး ၊ ပေါလျ စခိုးလျ ၊ ပီတာ ရှမိုကျကယျ ၊ ဒေးဗဈ ဘကျခမျး ၊ စီ ရျောနယျဒို တို့လို ထိပျထိပျကွဲ ကစားသမားတှနေဲ့ ကစား ခဲ့ဖူး ပါတယျ ။ အခုအခါ မှာတော့ သူ့ရဲ့ ကစားသမား ဘဝမှာ ကူညီပေးခဲ့တဲ့ သူတှအေကွောငျးကိုပွောလာပါတယျ။ အဲဒီသူတှကေ တော့ ရှနျနီ ၊ ပကျဂြီဆနျ ၊ အီဗရာနဲ့ မိုကျကယျကာရဈတို့ဖွဈပါတယျ။
“ကစားသမား ဘဝ ရဲ့ နောကျဆုံး ငါးနှဈ ၊ ခွောကျနှဈတာ အခြိနျ ကာလ တှကေ ကြှနျတေျာ့ အတှကျ ပြျောရှငျ စရာ အကောငျးဆုံးအခြိနျတှပေဲ ဖွဈပါတယျ ။ကြှနျတျောအနနေဲ့ တောငျပံနရောကနေ ကှငျးလယျ နရောကို ပွောငျးလဲကစားရတာကိုလညျး နှဈသကျခဲ့ပါတယျ။ ပှဲစဉျအနအေထားမှာ ပိုပွီးပါဝငျနိုငျခဲ့ပွီးတော့ ရှေးခယျြခှငျ့ တှလေညျး ပိုမြား ခဲ့ရ ပါတယျ ။ ယူနိုကျတကျမှာကစားတဲ့အခြိနျတုနျးကဆိုရငျ ကြှနျတေျာ့ဘေးနားမှာ စှမျးအားအပွညျ့နဲ့ ကစားသမားတှရှေိခဲ့ပါတယျ။ သူတို့တှကေ ကြှနျတေျာ့ကို ဝနျးရံပေးခဲ့ကွပါတယျ။ တိုကျစဈ နရောမှာဆိုရငျ ဝိနျး ရှနျးနီ ရှိပွီးတော့ ကှငျးလယျ နဲ့ တောငျပံ တှမှော လိုသလို ထှကျ ကစား ပေးတဲ့ ပကျဂြီဆနျ ရှိပါတယျ။ ကြှနျတျောနဲ့ကပျလကျြမှာဆိုရငျ မိုကျကယျ ကာရဈ ရှိပါတယျ။သူကခြိတျဆကျကစား ပေးပါတယျ။ ပွီးတော့ အရှေ့၊အနောကျ တဈလြောကျ မွနျမွနျနဲ့မှနျမှနျ ကစား ပေးတဲ့ ပတျထရဈ အီဗရာ တို့ရှိပါတယျ။ သူတို့ တှကေ ကြှနျတေျာ့ ကို အမြားကွီး ကူညီ ပေးခဲ့ ကွ ပါတယျ ”ဆိုပွီး ရိုငျယနျဂဈကပွောပါတယျ။
“ဒီလိုဝနျးရံသူတှရှေိခဲ့တာဟာ ကြှနျတေျာ့အတှကျကံကောငျး ခဲ့တယျ လို့ ဆိုရပါမယျ။ ကြှနျတေျာ့အနနေဲ့ကတော့ ပွိုငျဖကျ အသငျးသား တှကေို လိမျခေါကျ ကြျောဖွတျ ကစား နိုငျစှမျးရှိခဲ့ပါတယျ။ တကယျလို့ ကှငျးလယျ ပိုငျးမှာ ဘောလုံးပေးစရာ လူ မရှိ တော့ရငျ ကြှနျတျော တို့ အနနေဲ့ ပွိုငျဖကျ ကို ကြျောဖွတျ ကစားနိုငျရေးလုပျရပါမယျ။ ကှငျးလယျပိုငျးကို ရောကျလာတာနဲ့အမြှ အသငျးဖျောတှနေဲ့လညျး စကားအမြားကွီးပွောလို့ရတာကွောငျ့ တိုးတကျခဲ့ပါတယျ။ မြားသောအားဖွငျ့ကတော့ ကာရဈနဲ့ပါ။သူက နောကျခံလူ ၄ ယောကျရဲ့ရှမှေ့ာ ကစားတာရတာ နှဈသကျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ကြှနျတျောက ကှငျးလယျကနေ တိုကျစဈကို ရှလြေ့ားကစားနိုငျခဲ့ပါတယျ။”ဆိုပွီးတော့လညျး ရိုငျယနျဂဈကပွောပါသေးတယျ။
“ကြှနျတျောကှငျးလယျပိုငျးမှာအကောငျးဆုံးကစားနိုငျတာအတှကျ အသငျးဖျောတှကေို ခြီးကြူးဂုဏျပွုရပါမယျ။ အထူးသဖွငျ့ မိုကျကယျ ကာရဈ ပေါ့ ။ သူဟာ ခံစဈ ကစားသမား တှေ ဆီက ဘောလုံးကို အမွဲလို လကျခံ ရယူလရှေိ့သူပါ။ ကြှနျတျောကတော့ ဘောလုံး လကျခံရယူဖို့နဲ့တိုကျစဈဆငျ နိုငျဖို့ အတှကျ သူဘောလုံး ပေးပို့ နိုငျမယျ့ နရောတဈခုမှာ နပွေီးတော့ ဘောလုံးစောငျ့ခဲ့ပါတယျ။ ပွီးတော့ခငျဗြားတို့အနနေဲ့ ပေါလျ ဂတျဈကှိုငျနီ ကို သတိ ရကွ ဦးမယျ ထငျ ပါတယျ ။ သူကှငျးလယျမှာဘောလုံးရရှိခြိနျဆိုရငျ ပွိုငျဖကျ အသငျးသားတှကေို လိမျခေါကျ ကြျောဖွတျ နိုငျစှမျး ရှိ ခဲ့သူပါ။ ကြှနျတျောလညျးသူ့အနအေထားမြိုးရအောငျ ကစားနိုငျခဲ့ပါတယျ”ဆိုပွီး ရိုငျယနျဂဈကပွောပါတယျ။ ဘောလုံးကနျတဲ့အခါ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ စညျးစညျးလုံးလုံးအခြိတျအဆကျမိမိကစားရတာကွောငျ့ ရိုငျယနျဂဈရဲ့အခုလိုပွနျပွောငျးပွောပွတာတှဟော အားလုံးအတှကျ သတိရစရာ၊အမှတျရစရာကိစ်စတှဖွေဈစမှောပါ။
ယူနိုက်တက် ဂန္ဓဝင် ရိုင်ယန်ဂစ်ကိုကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့ ကစားသမားလေးယောက်က ဘယ်သူတွေလဲ?
လက်ရှိ ဝေးလ် လက်ရွေးစင် အသင်း ရဲ့ နည်းပြ ဖြစ်သူ ရိုင်ယန်ဂစ်ဟာ ကစားသမား ဘဝ တစ်ခုလုံး ကို ယူနိုက်တက် အသင်းမှာပဲ မြှုပ်နှံ ထားခဲ့သူဖြစ်ပြီး၊ သူဟာ ၉၂ မျိုးဆက်ထဲက တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ရိုင်ယန်ဂစ်ဟာ ယူနိုက်တက်မှာ ဘယ်တောင်ပံတလျောက် အကောင်းဆုံးကစားခဲ့ပြီးတိုက်စစ်အတွက် ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါတယ်။ ရိုင်ယန်ဂစ်ဟာ အသက် ၄၀ လောက်အထိ ယူနိုက်တက်ရဲ့ စီနီယာအသင်းမှာ ကစားခဲ့တာဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံး ကစားတဲ့အခြေအနေမှာတော့ ကွင်းလယ်တိုက်စစ်ပိုင်းကို ပြောင်းလဲကစားခဲ့ပါတယ်။ ရိုင်ယန်ဂစ်ဟာ ယူနိုက်တက် အသင်းမှာ ကစားခဲ့တဲ့ အချိန် အတွင်းသူ့အနေနဲ့ ရွိုင်ကိန်း ၊ ပေါလ် စခိုးလ် ၊ ပီတာ ရှမိုက်ကယ် ၊ ဒေးဗစ် ဘက်ခမ်း ၊ စီ ရော်နယ်ဒို တို့လို ထိပ်ထိပ်ကြဲ ကစားသမားတွေနဲ့ ကစား ခဲ့ဖူး ပါတယ် ။ အခုအခါ မှာတော့ သူ့ရဲ့ ကစားသမား ဘဝမှာ ကူညီပေးခဲ့တဲ့ သူတွေအကြောင်းကိုပြောလာပါတယ်။ အဲဒီသူတွေက တော့ ရွန်နီ ၊ ပက်ဂျီဆန် ၊ အီဗရာနဲ့ မိုက်ကယ်ကာရစ်တို့ဖြစ်ပါတယ်။
“ကစားသမား ဘဝ ရဲ့ နောက်ဆုံး ငါးနှစ် ၊ ခြောက်နှစ်တာ အချိန် ကာလ တွေက ကျွန်တော့် အတွက် ပျော်ရွှင် စရာ အကောင်းဆုံးအချိန်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ တောင်ပံနေရာကနေ ကွင်းလယ် နေရာကို ပြောင်းလဲကစားရတာကိုလည်း နှစ်သက်ခဲ့ပါတယ်။ ပွဲစဉ်အနေအထားမှာ ပိုပြီးပါဝင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ ရွေးချယ်ခွင့် တွေလည်း ပိုများ ခဲ့ရ ပါတယ် ။ ယူနိုက်တက်မှာကစားတဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင် ကျွန်တော့်ဘေးနားမှာ စွမ်းအားအပြည့်နဲ့ ကစားသမားတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့တွေက ကျွန်တော့်ကို ၀န်းရံပေးခဲ့ကြပါတယ်။ တိုက်စစ် နေရာမှာဆိုရင် ဝိန်း ရွန်းနီ ရှိပြီးတော့ ကွင်းလယ် နဲ့ တောင်ပံ တွေမှာ လိုသလို ထွက် ကစား ပေးတဲ့ ပက်ဂျီဆန် ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ကပ်လျက်မှာဆိုရင် မိုက်ကယ် ကာရစ် ရှိပါတယ်။သူကချိတ်ဆက်ကစားပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ အရှေ့၊အနောက် တစ်လျောက် မြန်မြန်နဲ့မှန်မှန် ကစား ပေးတဲ့ ပတ်ထရစ် အီဗရာ တို့ရှိပါတယ်။ သူတို့ တွေက ကျွန်တော့် ကို အများကြီး ကူညီ ပေးခဲ့ ကြ ပါတယ် ”ဆိုပြီး ရိုင်ယန်ဂစ်ကပြောပါတယ်။
“ဒီလိုဝန်းရံသူတွေရှိခဲ့တာဟာ ကျွန်တော့်အတွက်ကံကောင်း ခဲ့တယ် လို့ ဆိုရပါမယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ကတော့ ပြိုင်ဖက် အသင်းသား တွေကို လိမ်ခေါက် ကျော်ဖြတ် ကစား နိုင်စွမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကွင်းလယ် ပိုင်းမှာ ဘောလုံးပေးစရာ လူ မရှိ တော့ရင် ကျွန်တော် တို့ အနေနဲ့ ပြိုင်ဖက် ကို ကျော်ဖြတ် ကစားနိုင်ရေးလုပ်ရပါမယ်။ကွင်းလယ်ပိုင်းကို ရောက်လာတာနဲ့အမျှ အသင်းဖော်တွေနဲ့လည်း စကားအများကြီးပြောလို့ရတာကြောင့် တိုးတက်ခဲ့ပါတယ်။ များသောအားဖြင့်ကတော့ ကာရစ်နဲ့ပါ။သူက နောက်ခံလူ ၄ ယောက်ရဲ့ရှေ့မှာ ကစားတာရတာ နှစ်သက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က ကွင်းလယ်ကနေ တိုက်စစ်ကို ရွေ့လျားကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။”ဆိုပြီးတော့လည်း ရိုင်ယန်ဂစ်ကပြောပါသေးတယ်။
“ကျွန်တော်ကွင်းလယ်ပိုင်းမှာအကောင်းဆုံးကစားနိုင်တာအတွက် အသင်းဖော်တွေကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုရပါမယ်။ အထူးသဖြင့် မိုက်ကယ် ကာရစ် ပေါ့ ။ သူဟာ ခံစစ် ကစားသမား တွေ ဆီက ဘောလုံးကို အမြဲလို လက်ခံ ရယူလေ့ရှိသူပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဘောလုံး လက်ခံရယူဖို့နဲ့တိုက်စစ်ဆင် နိုင်ဖို့ အတွက် သူဘောလုံး ပေးပို့ နိုင်မယ့် နေရာတစ်ခုမှာ နေပြီးတော့ ဘောလုံးစောင့်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ ပေါလ် ဂတ်စ်ကွိုင်နီ ကို သတိ ရကြ ဦးမယ် ထင် ပါတယ် ။ သူကွင်းလယ်မှာဘောလုံးရရှိချိန်ဆိုရင် ပြိုင်ဖက် အသင်းသားတွေကို လိမ်ခေါက် ကျော်ဖြတ် နိုင်စွမ်း ရှိ ခဲ့သူပါ။ ကျွန်တော်လည်းသူ့အနေအထားမျိုးရအောင် ကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်”ဆိုပြီး ရိုင်ယန်ဂစ်ကပြောပါတယ်။ ဘောလုံးကန်တဲ့အခါ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စည်းစည်းလုံးလုံးအချိတ်အဆက်မိမိကစားရတာကြောင့် ရိုင်ယန်ဂစ်ရဲ့အခုလိုပြန်ပြောင်းပြောပြတာတွေဟာ အားလုံးအတွက် သတိရစရာ၊အမှတ်ရစရာကိစ္စတွေဖြစ်စေမှာပါ။
အကျဖျအပေဉ်စမအဆငျ့မှာ ရှနျနီရဲ့ဒါဘီနဲ့ ဆုံတှနေို့ငျတဲ့ မနျယူ
မနျယူပဈမှတျဖာနနျဒကျဈ ဆကျရှိ၊မရှိကို စပို့တငျးနညျးပွအတညျပွုနိုငျခွငျးမရှိ